प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको सभामा बम विस्फोट - Naya Patrika
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको सभामा बम विस्फोट
दाङ, १३ मंसिर | मङि्सर १३, २०७४
-विस्फोटबाट जोगिए लालबाबु
-ओली बोल्नुअघि लगनखेलको चुनावी सभाछेउमा विस्फोट
दाङको तुलसीपुरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कांग्रेसको चुनावी आमसभालाई लक्षित गर्दै अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराउँदा नौजना घाइते भएका छन् । आमसभास्थलको झन्डै पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको तुलसी बोर्डिङनजिकै बम विस्फोट भएको हो । मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाको समूह बम फालेर भागेको थियो । प्रहरीले बम विस्फोट गराउने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
विस्फोटमा परी म्यादी प्रहरी तुलसीपुर–१२ उरहरीका विनोद चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ डाँडापातुका जेनी डिसी, बबई गाउँपालिका–६ का नेपबहादुर खत्री, सल्यान बागचौर नगरपालिका–२ की देवी डिसी गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरूलाई तुलसीपुरमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको शरीरका विभिन्न भागमा बमका छर्रा लागेका छन् ।
विस्फोटबाट तुलसीपुर–१७ का बोमराज सुनार र विनोद चौधरी, शान्तिनगर गाउँपालिका–२ का हिमलाल राम्जाली, बबई गाउँपालिका बुड्कवाकी सुनिता चौधरी र सल्यान ढोरचौर गाउँपालिका–२ का नरभूमि बुढाथोकी पनि घाइते भएका छन् । उनीहरूको तुलसीपुरस्थित राप्ती अञ्चल अस्पतालमा उपचार भएको छ । ‘घाइतेमध्ये पाँचजनाको अवस्था गम्भीर छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी सुधीर शाहीले भने, ‘उनीहरूलाई नेपालगन्ज रेफर गरिएको छ ।’
कांग्रेसले मंगलबार तुलसीपुरको अरनिको खेलमैदानमा चुनावी आमसभा गरेको थियो । सो सभालाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
देउवाले भने– कम्युनिस्ट शासन रोज्ने कि लोकतन्त्र ?
प्रधानमन्त्री देउवाले आसन्न निर्वाचन कम्युनिस्ट शासन रोज्ने या लोकतान्त्रिक शासन रोज्ने भन्ने निर्णायक प्रतिस्पर्धा भएको बताएका छन् । घोराहीमा आयोजित चुनावी सभामा कांग्रेस सभापति देउवाले दमन रोज्ने कि खुला शासन रोज्ने निर्णय गर्ने जिम्मा जनताको काँधमा रहेको बताए । ‘अहिलेको निर्वाचन दमन शासन कि खुला शासन भन्ने प्रतिस्पर्धाको लडाइँ हो,’ उनले भने, ‘आमजनतालाई मेरो आग्रह छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि कांग्रेसलाई विजयी बनाउनु अपरिहार्य छ ।’
कांग्रेस नेता पौडेलले कम्युनिस्टहरूले मुलुकमा ‘अनर्थ’ निम्त्याउन खोजेको दाबी गरे । जनता र राष्ट्रमाथि खेलबाड गर्ने नियतका साथ कम्युनिस्टहरू एक थलोमा उभिएको दाबी गर्दै उनले यो कुप्रयासविरुद्ध आमजनता उभिनु जरुरी रहेको बताए ।
लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका
झापा, १३ मंसिर
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री तथा झापा ३ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाको घरमा बम विस्फोट भएको छ । भद्रपुर १० स्थित चन्द्रगढीमा रहेको सिटौलानिवासमा मंगलबार राति १२ः४५ बजे सुतली बम विस्फोट हुँदा शौचालय र पर्खालमा सामान्य क्षति भएको छ । चुनावविरोधी अभियान चलाइरहेको समूहले कडा सुरक्षाका बीच रहेको सिटौलानिवासको पश्चिम दक्षिण दिशाबाट छिरेर विस्फोट गराएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीका अनुसार त्रास फैलाउन बम विस्फोट गरिएको हो । घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मीले एकजना शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाको बाह्रदशी ५ स्थायी घर भएका बिर्तामोडका राजेश कार्की छन् । उनलाई सिटौलानिवासबाट भाग्ने क्रममा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा जिम्मा लगाएको थियो ।
नेता सिटौलाले बम पड्काएर उम्मेदवार र समाजलाई आतंकित पार्ने कार्य गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘चुनाव बिथोल्ने समूहले देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट गराइरहेको छ, त्यो कार्य गलत हो,’ उनले भने । दोस्रो चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन उनले सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।
विस्फोटबाट जोगिए लालबाबु पण्डित
विराटनगर/मोरङ ६ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा एमाले नेता लालबाबु पण्डित विस्फोटबाट जोगिएका छन् । पण्डित र सो क्षेत्रको प्रदेश सभा (क) का उम्मेदवार जीवन आचार्यलाई लक्षित गरेर मंगलबार विराटनगरको डंग्राहामा बम विस्फोट गराइएको थियो ।
उम्मेदवारद्वय चढेको जिपभन्दा करिब १० मिटर अगाडि बम विस्फोट भएको पण्डितका स्वकीय सचिव वसिम आलमले बताए । चुनाव प्रचारका लागि विराटनगर–६ डंग्राहा जाने क्रममा मंगलबार बिहान सडकमा सुतली बम विस्फोट भएको थियो । बुढीगंगा ५ स्थित मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजनजिकै नहरको डिलमा राखेको सुतली बम बिहान साढे आठ बजेतिर विस्फोट भएको हो । मोरङका एसपी अरुण बिसीले विस्फोटबाट उम्मेदवारहरू सुरक्षित रहेको बताए । ‘अवस्था सामान्य छ, उहाँहरू प्रहरीसँगै आफ्नो प्रचार अभियानमा सरिक भइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
ओली बोल्नुअघि लगनखेलको चुनावी सभा छेउमा बिस्फोट
ललितपुर/वाम गठबन्धनले ललितपुरको लगनखेलमा आयोजना गरेको चुनावी सभास्थल नजिक मंगलबार बम विस्फोट भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भाषण गर्नुअघि विस्फोट भएको थियो । सभामा उद्घोषक हरि दाहालले ओलीलाई मन्तव्यका लागि बोलाउना साथ बम विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरु भागदौड गर्न लाग्दा उद्घोषकले गाडीको टायर पड्किएको भन्दै रोकेका थिए । ओलीले भने बम नै हुन सक्ने बताएका थिए ।
१ः४५ मिनेट जाँदा विस्फोट भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता (प्रहरी नायब उपरीक्षक) नरेन्द्र चन्दले बताए । घटना बसपार्कको विपरीत दिशामा पर्ने नमुना मछिन्द्र आवासीय मावि नजिकै भएको थियो । विस्फोटबाट कुनै क्षति नभएको चन्दले बताए । ‘विद्यालयको सिसा फुट्नेबाहेक ठूलो क्षति भएको छैन । प्रेसर कुकर बम फोहोर फाल्ने ठाउँमा विस्फोट भएको थियो । यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ चन्दले भने ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा धेरै सुरक्षा चुनौती
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरक्षा कसिलो बनाउन गृह मन्त्रालयलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । चुनाव आउन आठ दिन बाँकी रहँदा देशभरि हिंसात्मक घटना बढ्दै गएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र, ठूला नेताहरूबीचको टक्कर, चुनावविरोधी समूहको सक्रियता तथा भारतसँगको खुला सिमानाका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई गृह मन्त्रालयले थप चुनौतीपूर्ण आकलन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा सुरक्षा रणनीति केही फरक हुने बताउँछन् । ‘पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा केही फरक चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘ती चुनौती औँल्याएर हामीले सुरक्षा रणनीति बनाएका छौँ ।’
प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध आक्रामक कारबाही गरे पनि दलका उम्मेदवारमाथि आक्रमण रोकिएको छैन । मंगलबार पनि दर्जन ठाउँमा विस्फोट र आक्रमण भएका छन् । प्रहरीले देशभरि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका करिब चार सय नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । सार्वजनिक अपराध मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको छ । तर, पनि बाहिर रहेका नेता–कार्यकर्ताले चुनावविरोधी गतिविधि कायमै राखेका छन् ।
तराईमा सशस्त्र समूह पनि सक्रिय
प्रदेश नम्बर २ मा सशस्त्र समूह तथा केही आपराधिक समूह पनि सक्रिय भएका छन् । आइतबार सिरहामा प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएको थियो भने जयकृष्ण गोइत समूहले केही स्थानमा विस्फोट गरेको छ । सिके राउत समूहले पनि भोट नहाल्न अपिल गरेको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दुवाडीले बताए ।
लगनखेल र बालकोटमा विस्फोट
राजधानीमा पनि विस्फोटका घटना बढ्न थालेको छ । मंगलबार ललितपुरको लगनखेल र भक्तपुरको बालकोटमा बम विस्फोट भएको छ । दुवै ठाउँमा सामान्य प्रकृतिको विस्फोट भएको र कुनै क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ । लगनखेलको मच्छिन्द्र स्कुलपछाडिको खाली ठाउँमा दिउँसो करिब २ बजे विस्फोट भएको हो । घटनास्थलमा प्रेसरकुकरको टुक्रा भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी गणेश ऐरले बताए । भक्तपुरको बालकोटमा रोजभिलेजनजिकै विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटबाट कुनै क्षति नभएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले बढायो चेकजाँच
शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटना बढ्दै जान थालेपछि प्रहरीले राजधानीका नाका र होटलहरूमा चेकजाँच कडाइ गरेको छ । साथै, आकस्मिक गस्ती पनि बढाएको छ । भक्तपुर र ललितपुरमा दुई दिनअघि विस्फोटक पदार्थ भेटिएका थिए । मंगलबार दुई स्थानमा विस्फोट भएपछि प्रहरीले सबैजसो होटेलमा आकस्मिक चेकजाँच गरेको छ ।